Etu esi enweta Windows 10 ka ọ rụọ ọrụ nke ọma | Akụkọ akụrụngwa
Ị chọrọ kwalite Windows 10? Ọ bụ ụdị kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ama ama nke Microsoft mepụtara wee wepụta ya na ahịa. Ka oge na-aga, ọ jisiri ike idobe ya dị ka sistemụ arụmọrụ nke abụọ ejiri rụọ ọrụ n'ụwa niile, naanị Windows 7 karịrị, nke na-aga n'ihu ịnwe nkwado na ntụkwasị obi nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ, mana ọkachasị nke mpaghara azụmahịa niile, na-ala azụ ịgbanwe mgbe niile.
Njirimara ya, nhọrọ ndị ọ na-enye anyị na arụmọrụ dịnụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị meworo Windows 10 ka ọ bụrụ otu n'ime sistemụ arụmọrụ kachasị ewu ewu n'ụwa. N'akụkụ na-adịghị mma, anyị na-aga n'ihu na-achọta oke nwayọ ya n'oge ụfọdụ. Iji gbalịa idozi ya taa anyị ga-agwa gị esi eweputa Windows 10 iji rụọ ọrụ nke ọma.
Nke mbụ, anyị ga-agwa gị na aghụghọ ndị a ga-enyere gị aka nke ukwuu n'ọtụtụ oge, mana nke ahụ enweghị obi abụọ ha enweghị ndejọ, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị nwere kọmpụta oge ochie. Ọbụna na ihe niile ị na-eme ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị ga-ahụ na-esote iji bulie Windows 10, ha kwesịrị inye gị obere aka iji mee ka kọmputa Windows 10 gị rụọ ọrụ nke ọma karị ma nweta ọsọ ọsọ.
1 Emela ihe mmemme obula ibido Windows 10
2 Cortana, achọghị m gị ọzọ
3 Ibidogharịa nwere ike ịbụ ihe ga - egbo nsogbu gị
4 Nhazi nke Windows 10; bụụrụ ọtụtụ nsogbu
5 Windows 10 Ndenye Malite nwere ike ịbụ nsogbu
6 Mee ka njikọ gị pụọ iche ma ghara ịkọrọ ya onye ọ bụla
7 Nweta Windows 10 ma na-arụ ọrụ
Emela ihe mmemme obula ibido Windows 10
Otu nsogbu buru ibu nke ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-enwekarị bụ na kọmputa anyị na-ewe ezigbo oge ebighi ebi ịmalite. Nsogbu a n'ọtụtụ ọnọdụ bụ ihe kpatara sistemụ arụmọrụ, na nke a na Windows 10, mana ọ nwere obere ihe ọ bụla metụtara sistemụ arụmọrụ mgbe anyị ahazila ihe omume iri na abụọ ọzọ iji malite n'otu oge.
Ma ọ bụ ya na ọtụtụ oge anyị na-amaghị nke ukwuu nke mmemme na-amalite oge ọ bụla anyị na-amalite kọmputa, ọtụtụ n'ime anyị anaghị adịkarị mkpa. Iji lelee mmemme ndị amalitela yana sistemụ arụmọrụ, yana iji nwee ike iwepụ nhọrọ a, anyị ga-pịa bọtịnụ aka nri nke òké na akara ngosi mmalite nke Windows 10. Ugbu a, anyị ga-emeghe Ihe njikwa, na ịpị taabụ Home ị ga-ahụ ihe oyiyi yiri nke a dị n'okpuru;
N'ime ndepụta anyị na-achọta mmemme na usoro niile na-amalite n'otu oge ahụ Windows 10, na-eme ka anyị mara mmetụta ha nwere na mmalite usoro. Iji gbanyụọ mmemme niile ị na-agụghị dị mkpa, belụsọ na ọ malitere n'otu oge ọ bụla ị gbanye kọmputa gị, ị ga-aka akara ha ma pịa bọtịnụ gbanyụọ. Enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ ndị ịchọrọ ebe ị nwere ike ịkwado ha n'oge ọ bụla ọzọ.
Cortana, achọghị m gị ọzọ
Cortana O doro anya na ọ bụ otu nnukwu kpakpando nke Windows 10, mana n'otu oge ahụ onye inyeaka na-emefu nnukwu ego, ọkachasị na kọmputa ochie, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ka ị nyochaa isi okwu a ma ọ bụrụ na PC gị na-agba ọsọ. Naanị ngwaike na ịchọrọ ịkwalite Windows 10 dị ka o kwere mee.
Na mgbakwunye, onye enyemaka ahụ ka dị anya site na ihe ọ dị ka ọ ga-adị na mbụ ma ọtụtụ na-ekpebi gbanyụọ ya iji zere ịkwụsịtụ iwe ma chekwaa akụ.
Iji kwụsị Cortana, ihe ị ga - eme bụ ịga ntọala nke onye inyeaka wee sị gị ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ opekata mpe Ma ọ bụ na n'oge ọ bụla ị nwere ike megharịa ya ma jiri ya bụrụ ezigbo onye ọrụ njem gị na-eji Windows 10.
Ibidogharịa nwere ike ịbụ ihe ga - egbo nsogbu gị
O nwere ike iyi nzuzu, mana ịhapụ kọmputa ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị, na-akwụsịtụ ya ma ọ bụ na-agbanwe ndị ọrụ ka onye ọ bụla ghara ịnweta oge anyị, nwere ike bụrụ nsogbu nke nwayọ nwayọ. Ma nke ahụ bụ Site na ịgbanyụ akụrụngwa, ebe nchekwa echebeghị kpamkpam na ihe nke a pụtara. Ọ bụrụ na anyị na-ejikwa, dịka ọmụmaatụ, egwuregwu nwere eserese dị elu, nke na-eji nnukwu nchekwa, nsogbu nwere ike ịka njọ.
Site na ịmalitegharia anyị nwere ike ịkwụsị nsogbu ndị a niile site na otu ọrịa strok, ma mee ka kọmpụta anyị nwee ebe nchekwa ọ bụla ọzọ, na - alaghachi na nkenke ebe ihe niile na - arụ ọrụ karịa ma ọ bụ obere ọsọ ọsọ.
Obi dị anyị ụtọ na otu ụbọchị, anyị nwere ike idobe kọmputa anyị nke Windows 10 ruo ụbọchị ma ọ bụ izu, mana ugbu a, nkwanye anyị bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke a, bidogharịa ya opekata mpe ụbọchị ole na ole iji zere ịkwụsị icheta ihe na inwe nsogbu jiri nwayọ na sistemu ọ nwere ike mechaa mee ka ị daa mba.
Nhazi nke Windows 10; bụụrụ ọtụtụ nsogbu
Mgbe Windows 10 kụrụ ahịa, ọ mere nke a site na ntinye doro anya iji hazie yana iche onwe ya site na ya n'ihi mgbanwe dị mma ma e jiri ya tụnyere ndị bu ya ụzọ. Obi abụọ adịghị ya na nke a nwere mmetụta dị mma dị mma, ọ bụ ezie na n'otu oge ahụ ọ na-ewute ndị ọrụ, ọkachasị ndị nwere akụrụngwa ochie. Ma nke ahụ bụ ihe atụ Ihe eserese niile nke sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nwere buru ibu buru ibu n'ihu anyị, nke ọtụtụ n'ime anyị chọrọ maka ihe ndị ọzọ.
Akụkụ dị mma bụ na enwere ike ịkwụsị mmemme ndị a n'oge ọ bụla, site na ịpị bọtịnụ aka nri nke òké na bọtịnụ Windows Start, na ịnweta System. Ozugbo anyị ga-enweta ya Nhazi usoro di eluNa windo ga-apụta, họrọ Advanced Options. N'ime ngalaba Ọrụ anyi aghaghi inweta Nhazi na n'ime Nhọrọ ịrụ ọrụ anyị ga-ahụ nhọrọ nke Nlere anya ebe anyị nwere ike iwepu Windows 10 animations na akụkụ ndị ọzọ metụtara imewe.
Buru n'uche na mgbe a bịara n'ịgbanwe nhazi nke Windows 10, ọ nweghị ihe ga-adị ka ihe ị na-eji, ya mere atụla ụjọ ma jiri ya mee ihe ngwa ngwa o kwere mee.
Windows 10 Ndenye Malite nwere ike ịbụ nsogbu
Otu n’ime ihe omuma ndi Windows 10 wetara bu Ngwa ngwa, nke na-enye gị ohere ịmalite sistemụ arụmọrụ ngwa ngwa, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ megidere kpamkpam, na-ewepụta nsogbu karịa uru.
Ma ọ bụ ya oge ụfọdụ ụdịrị mbido a ga-ebelata mmalite nke Windows 10, na -emepụta nsogbu. N'ezie, idozi ya dị mfe ebe ọ bụ na anyị ga-enweta Nhọrọ Ike ma chọọ nhọrọ ahụ Họrọ omume nke bọtịnụ Malite / Gbanyụọ na uru ọhụụ pịa Gbanwee nhazi adịghị. Ugbu a, ị ga-enwe ike ịhụ ọrụ Ndenye Malite ma gbanyụọ ya ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ya ma ọ ga-enye gị nsogbu karịa uru, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ka ị nyochaa nhọrọ a iji bulie Windows 10 ruo na nke kachasị.
Ọ bụrụ n’ịchọtaghị nhọrọ a, echegbula onwe gị n’ihi na kọmpụta anaghị akwado ya, n’agbanyeghi na inwere nwụnye Windows 10 kachasị ọhụrụ.
Mee ka njikọ gị pụọ iche ma ghara ịkọrọ ya onye ọ bụla
Kemgbe e kere ya afọ ole na ole gara aga, Internetntanetị dabere na ụkpụrụ nke ịkekọrịta ozi, mana Windows 10, aka na Microsoft, na-ewe nke a na ọkwa nke ọtụtụ n'ime anyị na-amị na mkpịsị aka anyị. Ma nke ahụ bụ Usoro mmelite nke sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nwere ike ime ka ibudata ọdịnaya ọ bụghị naanị na netwọk nke netwọkụ kama site na kọmputa ndị ọzọ, na-agbanye kọmputa gị ka ọ bụrụ ihe nkesa maka nbudata nke ndị ọzọ.
Nke a na-eme ka njikọ Internetntanet anyị belata, na-eme ka anyị kwenye na kọmputa anyị na-aka nká ma ọ bụ na-eriju afọ.
Iji bulie Windows 10 ntakịrị ma mee ka njikọ gị pụọ iche ma ghara ịkekọrịta ya na onye ọ bụla, anyị ga-aga Ntọala Windows 10 wee họrọ Mmelite na Nchekwa, wee họrọ Nhọrọ di elu, ma mesịa pịa Họrọ otu ị chọrọ ka esi nyefee mmelite. Ozugbo ị ga-emerịrị nhọrọ ahụ mmelite site na ebe karịrị otu ebe.
Nweta Windows 10 ma na-arụ ọrụ
Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ Redmond malitere ụdị mbụ nke Windows, o meela ka o doo anya na ọ na-elekọta ma na-elekọta ndị ọrụ, ruo n'ókè na na Windows 10 ọ na-arụ ọrụ na ndabara na ọkwa ebe oriri na ahụike zuru oke nke kọmputa gị bụ nnukwu ndị ga-erite uru.
Agbanyeghị nke a nwere ike ịbụ nsogbu nye ọtụtụ ndị ọrụ, yabụ ezigbo nhọrọ iji nweta ọsọ na arụmọrụ anyị kwesịrị itinye Windows 10 ka ọ rụọ ọrụ na arụmọrụ zuru oke. Iji mee nke a, ị ga-pịa aka nri na Windows 10 Malite iji nweta nhọrọ Ike. Dị ka e gosiri na foto na-esonụ, ebe ahụ ị nwere ike ịhọrọ atụmatụ ọzọ maka ndị otu gị.
You jisie ike bulie Windows 10 ka o wee rụọ ọrụ nke ọma site na ndụmọdụ anyị?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no. Ọzọkwa ọ bụrụ na anyị amata ndụmọdụ ndị ọzọ iji bulie sistemụ arụmọrụ Windows 10 ọhụrụ, ka anyị mara, ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, anyị ga-agbasa ndepụta a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ebuli Windows 10
"Ntị nnara", ma ọ bụ otu esi anakọta nzụta gị n'aka Amazon na naanị nkeji 2